Xog: DF oo Muqdisho ku xayirtay diyaarad ku socotay Garbahaareey | Somsoon
Home WARAR Xog: DF oo Muqdisho ku xayirtay diyaarad ku socotay Garbahaareey
Xog: DF oo Muqdisho ku xayirtay diyaarad ku socotay Garbahaareey
Xog Ay Heshay Warbaahinta ayaa xaqiijineysa in maalintii 3-aad garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ay ku xayiran-yihiin dad gaaraya ku dhawaad 40 qof, kuwaas oo ku wajahnaa magaalada Garbahaareey ee xarunta gobalka Gedo.
Si rasmi ah looma oga tirada dadka ku xayiran garoonka Muqdisho hase yeeshaa waxaa lagu sheegay ku dhowaad 40 oo la socday diyaaradda oo qaada 60 qof.
Dadkaan ayaa sidoo kale loo diday in ay ka baxaan garoonka waxaana laga ilaalinayaa in ay la hadlaan warbaahinta. Ciidanka NISA ee ku sugan garoonka ayaa sheegay in baaritaan uu ku socda laba qof oo rakaabka ka mid ah.
Arrintaan ayaa ku soo aadaysa iyadoo Rooble uu guddi u saaray in dib u heshisiin loo qabto dadka gobalka Gedo gaar ahaan reer Garbahaareey si loo guda galo doorashada Soomaaliya, waxaana la aaminsan yahay in arrintaan ay culeys ku keeni doonto dedaalada socdo.
Article horeCiidanka kumandooska danab Oo Hawlgal Ka Sameeyey Degaano Ka tirsan G/Shabeelaha dhexe
Article socoda Beel ka mid ah Hawiye oo digniin culus u dirtay Puntland